OEM ee Badbaadinta Waxsoosaarka Sumadda 'Clasule' ee gubashada dufanka & Dhismaha Jirka
Shayga CLA (Conjugated Linoleic Acid) waxaa laga helaa badeecooyin badan oo cunto ah. Waxay kaa caawin kartaa joogteynta heerarka nafaqada caafimaadka leh iyo maareynta dufanka caadiga ah. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa nafaqooyinka inay galaan unugyada muruqyada firfircoon, iyagoo markaa taageeraya murqaha caafimaadka qaba. Waxay ka caawisaa yareynta dufanka jirka waxayna hagaajisaa halabuurka jirka.
1. Yaraynta dufanka jirka iyo ilaalinta unugyada muruqyada;
2. Kordhinta heerarka insulin, yareynta sonkorta dhiigga iyo heerarka triglyceride;
3. Yaraynta fal-celinta xasaasiyadda ee cuntada ay keento;
4. Kordhinta xasaanadda;
5. Kobcinta koritaanka murqaha.